Maxaa Ku Soo Kordhay Heshiis Kordhinta Folarin Balogun Ee Kooxda Arsenal
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMaxaa ku soo kordhay Heshiis kordhinta Folarin Balogun ee Kooxda Arsenal
Folarin Balogun ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhow yahay inuu qandaraas cusub oo waqti dheer ah u saxiixo Arsenal .
19 jirkaan qandaraaska uu haatan ku joogo garoonka Emirates ayaa dhacaya dhamaadka bisha June, kooxo dhowr ah ayaa la sheegayaa inay doonayaan inay kula wareegaan si xor ah.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Daily Mail , hubin la’aanta ku xeeran mustaqbalka wiilkaan yar ayaa dhowaan soo afjari doonta isagoo isku diyaarinaya inuu qalinka ku duugo qandaraas cusub oo uu kula joogo kooxda Mikel Arteta .
Warbixinta ayaa sheegeysa in tababaraha Gunners Arteta uu door muhiim ah ka ciyaaray qancinta weeraryahanka inuu mustaqbal dheer ku leeyahay kooxda ka dhisan Waqooyiga London.
Balogun ayaa dhaliyay sideed jeer 16 kulan oo uu u saftay Arsenal Under-23s Premier League 2 xilli ciyaareedkan, halka uu sidoo kale ka soo muuqday shan jeer kooxda koowaad, isagoo dhaliyay labo gool.
Manchester City , Everton iyo Crystal Palace ayaa dhamaantood loo maleynayay inay ku raad joogaan saxiixa weeraryahanka.